Yakanyanya Simba Inoshanda Yakaderera-E Yakavharwa Girazi Mugadziri uye Fekitori |Jinjing
Sei Kusarudza Low-E girazi?Inochengetedza sei simba?
Yakaderera-E girazi inoreva girazi rine yakaderera emissivity coating.Iyo inoderedza kuwanda kwekupisa kana kurasikirwa nekuratidzira-refu-wave infrared simba (solar kupisa), saka inodzikisa kukosha kweU & solar kupisa kuwana uye inovandudza kushanda kwesimba kwekupenya.Nekuda kwekusarerekera kwayo muchimiro uye kushanda nesimba, yakaderera-E girazi inoshandiswa zvakanyanya mukugara uye zvivakwa zvekutengesa uye inotarisirwa kuramba ichiwedzera mukushandiswa mumakore anotevera.
Ndeupi musiyano uripo pakati pegirazi rakapfava uye rakaomarara rakavharwa Low-E?
Yakaderera-E girazi inogadzirwa neiyo yakaderera emissivity yekuputira firimu pamusoro pegirazi nenzira dzemuviri kana kemikari.Parizvino, matekinoroji akakura ekugadzira ekutengesa kweLow-E girazi anosanganisira vacuum magineti emission (yemuviri nzira, inonziwo offline Low-E girazi & yakapfava yakavharidzirwa Low-E girazi) uye kemikari vapor yekupfapfaidza maitiro (kemikari nzira, inonziwo online Low. -E girazi uye yakaoma yakavharwa Low-E girazi).
ZVINHU soft coated hard coated
2. Yakapedzwa mumutsara wekugadzira girazi wakazvimiririra
3. Multilayer composite coatings pamusoro pegirazi pamusoro 1. Chemical vapor deposition
2. Pedzisa kupfekedza mubhati yetini yemutsetse wekuyangarara
Kusiyana kweChitarisiko & Kuita Akapfuma chigadzirwa akateedzana: hombe sarudzo yemhando yekutaridzika kweruvara uye data rekuita Chigadzirwa chakatevedzana chiri nyore: chitarisiko cheruvara uye parameter zvakaringana zvakagadziriswa nekusarudzika kushoma.
Firimu Kugadzikana & processability 1. Iyo firimu iri nyore kuve oxidized uye inogona kuchengetwa kwemakore 1-2 mushure mekuiswa kwehunyanzvi;
2. Haikwanise kushandiswa muchidimbu che monolithic, inofanira kushandiswa mushure mekudzivirira, uye chifukidzo chiri mumhango ye insulated;
3. Yakakosha kesi: Jinjing katatu zvigadzirwa zvesirivheri zvinogona kushandiswa mune laminated girazi, uye iyo yekupfeka inogona kubata iyo yekupfeka zvakananga. 1. Iyo yekuputira yakasvibiswa negirazi, iyo yakaoma zvikuru uye yakagadzikana.Inochengetwa segirazi rinoyangarara rakajairika;
2. Inogona kushandiswa muchidimbu che monolithic;Zviri nyore kugadzirwa uye nzira yekugadzira yakafanana neyakajairwa girazi rekuyangarara
Jinjing Star Zvigadzirwa US1.16, UD49, UD68, UD80,SOLARBAN70, SOLARBAN 72 EazyTek
Ndeipi misiyano yekatatu, kaviri, imwe sirivha yakaderera E girazi?
Uchiri kuvhiringika here?
Mune girafu, aya matatu solar spectral transmittance curve yekatatu, kaviri, imwe sirivheri yeLow-E girazi ine yakafanana inooneka mwenje transmittance.Nzvimbo yepakati yemutsara wakatwasuka inzvimbo yechiedza chinooneka (380-780 nm), uye inooneka chiedza transmittance yemhando nhatu dzeLow-e yakafanana.Nzvimbo yekurudyi yemutsara wakamira infrared ray area (780-2500 nm).Sezvo kupisa kwakawanda kuchitakurwa nemwaranzi ye infrared, nzvimbo iri pasi pe curve inoratidza simba rekupisa iro simba rezuva rinoenda zvakananga kuburikidza negirazi.Sirivha imwe chete Low-e ine nzvimbo hombe, sirivha yakapetwa kaviri Low-E inotora nzvimbo yechipiri, uye sirivha katatu Low-e inotora nzvimbo diki zvinoreva kuti kupisa kushoma kunopinda nemugirazi, uye yakanyanya kupisa kupisa kuita.
Mune girafu, aya matatu solar spectral transmittance curve yekatatu, kaviri, imwe sirivheri Low-E girazi ine yakafanana SHGC kukosha mukati me380-2500 nm.Iko kukosha kweSHGC kwakafanana, zvinoreva kuti nzvimbo irimo yegirazi yakavharwa inofanana, asi chimiro chekugovera chevhavha chiri pachena chakasiyana, uye sirivha katatu Low-e inotora nzvimbo diki zvinoreva kuti kupisa kushoma kunopinda mugirazi. .Iine kukosha kwakafanana kweSHGC, iyo katatu sirivha Low-e kudzivirira kugona kweiyo infrared thermal mwaranzi yakakura kupfuura iyo yesirivheri yakapetwa kaviri uye imwe sirivheri Low-e girazi, iyo yakavandudza zvakanyanya kunyaradza kwemukati muzhizha.
Sei uchisarudza Jinjing Low-E Girazi?
Tekinoroji inotungamira pasi rose kubva kuPPG America.
Yakasarudzika sosi yehunyanzvi hwekupfeka nyanzvi muindasitiri yegirazi.
Yakasimba tekinoroji sevhisi timu yerutsigiro rwevatengi.
Chekutanga kugadzira muChina kupa off-saiti inodziya katatu sirivha Low-E, LSG inosvika 2.32.
IGU inooneka chiedza kutapurirana 82%, yakakwirira pamusika.
IGU U-factor inosvika 1.01 W/m2.K, yakaderera pamusika.
3. Indasitiri mukana:
Iyo yakapfuma chigadzirwa chimiro, yakazara indasitiri cheni kubva kuchena girazi rinoyangarara, akasiyana girazi reti, rekupedzisira rakajeka girazi kupedzisa chigadzirwa mhinduro kune vatengi.
1. Pamusoro pekuita data inoverengwa maererano nestadards NFRC 2010, EN673 uye JPG151.
2. Iyo data yekushanda ndeyekutarisa chete.Jinjing achabata kodzero yekududzira kwekupedzisira.
Ukobvu 4mm, 3.2mm± 0.1mm 4mm, 3.2mm± 0.1mm 4mm, 3.2mm± 0.1mm 4mm, 3.2mm± 0.1mm 4mm, 3.2mm± 0.1mm
Mana-point probe / Nagy Sheet Resistance Meter
1 pcs girazi
Zita reProjekiti:The Exchange-106
Girazi:8mm UD80 7000㎡ye podium chimiro
Zita reProjekiti:Oracle hofisi Texas
Girazi:10mm Solarban 72 jumbo saizi
Zita reProjekiti:Waldorf Astoria
Girazi:6mm, 10mm Solarban 72 2000㎡ yekuvhara madziro
Zita reProjekiti:Nikko Toshogu (400 Anniversary Project)
Girazi:10mm US83 1000 ㎡ yemadziro eketeni
Zvakapfuura: ZHIZHEN Anti-reflective Coating Girazi
Zvinotevera: 3mm-12mm Tinted Float Glass (Bhuronzi, Bhuruu, Girazi, Girini)
Kaviri Silver Yakaderera-E Coating Girazi
Kaviri Silver Yakaderera-E Girazi
Soft Coated Low-E Girazi
Triple Silver Low-E Girazi